Warbixin: Dowladda iyo Xorriyadda Saxaafadda – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Warbixin: Dowladda iyo Xorriyadda Saxaafadda
By Sonna Whiteka / February 14, 2020 February 14, 2020
Maalmo ka hor ayay noo soo direen template su’aalo diyaarsan ah, jawaabihii aan siinneyna aad ugama muuqdaan warbixinta.
Dowladda Soomaaliya waxa ay xurmad u haysaa oo dhowreysaa xorriyadda Saxaafadda iyo xorriyadda hadalka guud ahaan.
Ma jirto cago jugleyn iyo ciriiri gelin lagu hayo saxaafadda iyo saxafiyiinta.
Dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma jiro wariye u xiran, ama makamadeyntiisu socoto ama maxkamadi doondooneyso.
Ma jirto xog helis laga hor joogsday saxaafadda, waxaase jirta in xilliyada qaar la xaddido galista goobaha ay qaraxyadu ka dhacaan, taas oo loogu daneynayo wariyeyaasha iyo dadka rayidka ah inta laga hubinayo in aan khatar kale ka jirin goobta.
Marar badan waxaa dhacda in qarax labaad ka dhaco goobta, taas oo ay wariyeyaal iyo dad kaleba wax ku gaaraan, waxay horay uga dhacday Hoteel Saxafi, Dayax, Hooyooyinka, Jazeera iyo goobo kale oo mararka qaar wariyeyaal wax ku noqdeen.
Nasiiba darro wariyeyaasha qaar ayaa goobaha qaraxyada taga oo si toos ah (live) ugu soo tabiyay dad gubanaya, kuwo dhiig baxaya iyo maydad dhulka waran, taas oo ka soo horjeedda qawaaniinta caalamiga ah iyo anshaxa saxaafadda.
Dowladdu waxay ku dhaqantaa sharci, dastuurkeenna iyo shuruucda kale ee dalka ayaa damaanad qaadaya xorriyadda hadalka.
Ma ogin facebookyo dad laga xiray, dowladduna ma oggola arrintaas oo ah sheegasho aan caddeyn loo hayn.
W/D: Hon. ADAM ISAK ALI